Talooyin hadalka English - wanaajiyo Ingiriisi hadlay! | USAHello | USAHello
Talooyin hadalka English - wanaajiyo Ingiriisi hadlay!
Ma rabtaa in aad si fiican ugu wada hadal Ingiriisi si aad u hesho? Waxa ugu fiican ee aad samayn karto waa dhaqanka, dhaqanka, iyo dhaqanka more! Raadi qaar ka mid ah siyaabaha aad ku hagaajin karaa Ingiriisi hadlay.
Haddii aad ku cusub ee USA, wada hadal Ingiriisi waa xirfad ugu muhiimsan ee aad ku baran kartaa. Waxaad u baahan tahay in ay ula xiriiraan Americans in aad nolol maalmeedka. Isagoo ka hadlayay Ingiriisi sidoo kale kaa caawin doona inaad shaqo si aad u hesho, waxbarasho, oo ay bartaan xirfado kale.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin si ay kaaga caawiso wanaajiyo wada hadalka English.
Ma wax yar oo ka mid ah wada hadal Ingiriisi maalin kasta
Tani waa tip ugu horeysay sababtoo ah waa waxa ugu muhiimsan. wada hadalka English u eg yahay waxyaalo badan oo kale. Haddii aad in yar oo ah maalin kasta, waxaad ka heli doontaa si fiican. Layliska weedh cusub ama erayga aad ku bartay waxa la isticmaalayo ee su'aal ama hadal ah.
Ha welwelin ku saabsan sida aad ka dhawaajiyaan!
In badan oo aad ku hadasho, aad dhawaaq ku sii fiicnaan doono. Laakiin haddii aad dareensan tahay is-miyir qabo, aad had iyo jeer dhihi karaa, "Fadlan raalli iga Ingiriisi. Anigu waxaan ahay barte Ingiriisi ah."Dadka intooda badan waxay noqon doontaa bukaanka iyo nooca.
Baro qaar ka mid ah weedho faa'iido leh
Baro a weedho yar in aad u baahan doontaa in xidhiidhka aad maalin walba. Haddii aad diyaar u yihiin, aad noqon doontaa mid ka diyaar u weydiiso ama ka jawaab su'aalaha. Waad awoodaa maqalay ama akhrino weedho badan oo Soomaali ah oo ku saabsan Englishspeak.
Layliska hadalka Ingiriisi shaqada
U sheeg dadka kula shaqeeya in aad u baahan tahay in ay ku dhaqmaan Ingiriisi. Weydii su'aalo ku saabsan hadallo, waxaana aad waydiisaa in aad la saxo marka aad qaladaad sameeyo.
Layliska hadalka English guriga
xubnaha qoyskaaga sidoo kale u baahan in ay bartaan Ingiriisi iyo ku dhaqmaan wada hadalka English. Isku day inaad ku hadalka Ingiriiska halkii afkaaga hooyo marka aad wada joogtaan ee cuntada. Carruurtaada waxaa laga yaabaa in barashada Ingiriisiga ee dugsiga. Ku dhiiri geli by hadlaya Ingiriisi iyaga iyo samaynaya guriga iyaga la. Waxaad dhan si dhakhso ah wax uga baran doontaa.
Dhegayso Ingiriisi sida ugu badan ee aad awoodid
Fiiro-Ingiriisi ku hadleen aad maqasho raadiyaha, TV waa, iyo marka aad soo baxo dadweynaha.
Volunteer in aad bulshada
Haddii aad haysato waqti, siiyo saacad ama laba todobaad kasta si ay shaqo iskaa wax u qabso ah. Inaad sabab fiican ugu deeqay karaa waqti aad - koox kadib ee caruurta ku cusub, tusaale ahaan, halkaas oo xirfadaha luqadda kuu gaar ah waxtar leh u noqon doonaa. Ama waxaad diyaarin karin ama cunto u adeegaan at bakhaar cunto maxalliga ah ama jikada bulshada. At meelaha oo dhan, waxaad la hadli kartaa dadka iyo gudashada xirfadaha hadalka English.
Layliska aad ku dhawaaqida
The Merriam Webster Learners Dictionary waa qaamuus online gaar ahaan loogu talagalay dadka barashada Ingiriisiga. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad in ay dhegeystaan ​​eray walba ee qaamuuska si aad u barato sida loo odhan. website ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay 75 layliyo for dhawaaq kaamil ah. Samee jimicsi ah maalin kasta.
Fahmaan wadhfiyey American Ingiriisi
Mararka qaarkood, Americans dhihi erayada, inaad kastaan ​​darteed, laakiin waxa ay ka dhigan tahay wax arrin oo kala duwan! Baro qaar ka mid ah wadhfiyey waa waxtar leh si ay u fahmaan in sheekada Ingiriisi American.
Qaado ah fasalka wada hadalka English bulshadaada
Waxaa jira fasalo lacag la'aan badan oo Ingiriisi wada hadalka iyo fasalo kale Ingiriisi ee USA. Waxaad ka raadin kartaa in FindHello fasalka kuu dhow. Dooro luqadaada, galaan magaalada ama cinwaanka, ka dibna dooro Waxbarashada & Fasallada Ingiriisiga.
Waxa kale oo aad sameyn kartaa in heli Kulliyadda bulshada oo weydii haddii ay fiidkii ama maalintii fasalada wada hadalka oo lacag la'aan ah. Ama waxaad ka codsan kartaa laybareeriga degmadaada. xarumaha shaqada qaarkood waxay leeyihiin fasalo Ingiriis ah ee qaxootiga iyo soo galootiga. Aad u ogaato xarunta shaqada ee kuugu dhow.
Layliska hadalka English online
Haddii ay kugu adagtahay in aad hesho fasal, bilaabaan barashada Ingiriisiga online. Waxaa jira dhowr fasallo Ingiriisi online aad samayn karto on your computer ama qalab mobile. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waa lacag la'aan waana laguu ogolaado in aad in ay ku dhaqmaan hadlaya.
Raadi lamaanahaaga afka ah wada hadalka English
Waxaa jira websites internetka ah oo aad isku diiwaan gelin kartaa lamaanahaaga luqad. Waxaad bari kartaa Isbaanish, tusaale ahaan, halka lammaanahaaga idin bara Ingiriisi. Exchange Sheekaysiga The ogolaanayaa inaad raadiso dadka meesha aad degan tahay iyo sidoo kale wada-hawlgalayaasha fog isticmaalaya software chat. Italki ayaa macalimiinta mushaarka iyo umeeriyeyaal, laakiin waxaa kale oo uu leeyahay liis-hawlgalayaasha free hadlaya. Haddii aad saxiixdo la cinwaanka emailkaaga, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u helaan liiska luqadda rafiiqa hooseeyaana wuxuu noqon doonaa "Community." Uma baahnid in aad bixiso wax haddii aad go'aansato in aad hesho macalin.
Haddii aanad fahmin qayb ka mid ah wadahadalka, caadi tahay in si edeb leh u weydiiso qof kale inuu ku soo celiyo waxa ay sheegay. Waxaad codsan kartaa in ay si tartiib ah u hadlaan, aad. Si taas loo weydiin in English, odhan, "Waan ka xumahay, laakiin waxa aad ku celin doonaa in ka badan oo si tartiib ah? Mahadsanid."
Isticmaal nidaam turjumaad degdeg ah haddii aad uga istaagi
Waxa kale oo jira siyaabo fara badan eed inay si dhakhso ah u turjumaan erayo cusub ama ka soo English. Waxaad isticmaali kartaa buugga qaamuuska ama weedh. Waxaad kaloo isticmaali kartaa qaamuusyo online. Google Translate waa website a iyo app a mobile ka caawin doona inaad turjunto erayada iyo weedhaha. Haddii aad qabto smartphone a, waxa kale oo aad awood u yeelan doonaan in ay sameeyaan in aad telefoon meel kasta oo aad! Waxaad isku dayi kartaa Google Translate online. Ama aad awoodid Download Google Translate app.
Isticmaal adeegyada turjubaanka
Haddii Ingiriisi waa kooban, waxaad xaq u leedahay sida waafaqsan sharciga Mareykanka si aad u codsato turjumaan xaaladaha qaarkood. Isbitaalada iyo dhakhaatiirta xafiisyada waa inay bixiyaan turjubaano. Sidaas maxkamadaha sharciga waa. Dugsiga ilmahaagu waa in aad siiyo gargaar luqadda Ingiriisiga qoray oo laga hadlay haddii aad u baahan tahay. Sidaas darteed haddii aad weli baranayaan in ay ku hadlaan Ingiriisi, weydiiso turjubaan si aad u hubiso in aad fahamto wada hadalka English muhiim ah. Waxa kale oo aad ka heli kartaa sida caawimo loo helo turjumaad bilaash ah.
Ha niyad jabin!
Ha quusan. Sii naftaada waqti dheeraad ah. Soon, aad naftaada yaabin doonaa xirfadaha dabiicaddiinna oo dhan erayo cusub baad u odhan kartaa!
Baro luuqada Ingiriiska – ESL Online
casharro Ingiriisi Florence Phillips 'caawiyo muhaajiriinta guulaystaan